Ebumnuche BTC bụ $ 28 - CoinWorldMap
Ebumnuche BTC bụ $ 28
Mee 10, 2022 Bitcoin, Cardano, Ethereum, polkadot, Shiba n'ime
Na Mọnde, Mee 9, ahịa crypto na-aga n'ihu na-ada, na-eyi egwu ịga n'ihu na-efunahụ izu gara aga nke mere ka ahịa ahịa crypto dum daa na $ 1,46 trillion mgbe 9,80% kwụsịrị n'ụbọchị ikpeazụ. Cardano na Shiba Inu nwere ike ịla n'iyi dị ka ebumnuche ọnụahịa BTC dị ugbu a na $ 28k dị ka onye nyocha na-ahụ maka ndị agha si kwuo.
N'oge ederede a Bitcoin, nke a na-ewerekwa dịka onye ndu nduzi maka ndị ọzọ cryptocurrencies, agbadala 24% na $ 8,18 n'ime awa 31 gara aga. Ethereum dara 7,86% ma na-ere ahịa ugbu a na $ 2331 mgbe ọ kwụsịrị nkwado $ 2500 na abalị Sọnde. Ndị ọzọ egwuregwu kachasị elu gụnyere Shiba Inu (SHIB), AAVE, Cardano (ADA) na Polkadot (DOT), bụ ndị tụfuru 17,5%, 17,43%, 15,31%, na 17% n'otu n'otu n'ime awa 24 gara aga.
chaatị BTC / USD site na TradingView
Tụta nsogbu ahịa ahịa ụta
Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọkachamara adọwo aka ná ntị na ịrị elu na-aga n'ihu na ndenye aha dollar US (DXY) nwere ike ime ka mgbazi ọzọ na Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Shiba Inu na ndị ọzọ cryptocurrencies. Ndị ọzọ kwenyere na ahịa ihe egwu ọdịnala na-eduga n'ụzọ.
"Nasdaq 100 adaala ọzọ maka izu nke ise n'usoro. Ahịa Crypto na-aga n'ihu n'ahịa ahịa na ihe anyị na-ahụ ugbu a bụ na ndị na-achụ ego na-ahụ BTC dị ka ihe ize ndụ, "Darshan Batija, onye na-arụkọ ọrụ na CEO nke Singapore dabeere na crypto ikpo okwu Vauld kwuru. "N'iburu n'uche nchegbu ọnụ ahịa dị elu, ọtụtụ ndị na-etinye ego na-eme usoro na-enweghị ihe ize ndụ, na-ere ma ebuka na cryptocurrencies iji belata ihe ize ndụ."
BTC na-aga n'ihu $28?
Ndị ọzọ, dị ka onye na-azụ ahịa oge ochie, Peter Brandt, kwenyere na Bitcoin nwere ike ịdaba na nkà na ụzụ ka ọ ghara ijide n'elu ọkwa nkwado isi. Na tweet na Mọnde, ọkachamara ahụ kwuru na BTC nwere ike ịchọta nkwado na $ 30K, "ugbu a na-amata $ 28 dị ka ebumnuche ọdịda."
Na Mee 1, Brandt chepụtara ọwa bearish mgbe nke ahụ gasịrị o buru amụma na ọnụahịa ahụ ga-adaba na $ 28 ma ọ bụrụ na usoro egwuregwu akwụkwọ akụkọ gosipụtara. Taa ọ dị ka ọ gbanweela ọnọdụ ya, gbachitere ebumnuche nkwado ya edegharịrị na nkwupụta: "Zụrụ mgbe onye ọ bụla na-ere ere, ree mgbe onye ọ bụla na-azụrụ."
Ire ahịa nke izu gara aga dị oke mkpa n'iwepụ aka fiat ma nwee ike ibute mmụba ọnụ ahịa BTC dị mkpa nke ukwuu, dị ka ụlọ ọrụ nyocha netwọkụ Santiment si kwuo.
Tụkwasị na nke a, n'ihi na nkwụsị nke ugbu a emeela ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke adreesị ọhụrụ na-azụta BTC, na ndị na-ejide ihe na-ezobe akpa ha na ọnụ ọgụgụ a na-enwetụbeghị ụdị ya, ndị ọkachamara kwenyere na nke a nwere ike. BTC ike achọrọ nke ukwuu iji chụpụ ọnụ ahịa ya na njikwa.
Otú ọ dị Bitcoin na-eche ihe ize ndụ dị nso nke ịdaba na nso nso $28 n'agbanyeghị mbelata stochastic kwa izu n'ime mpaghara a na-ere ere. The Trader Sentiment Index na-egosikwa "oke egwu" - anyị niile maara ihe na-emekarị mgbe nke a gasịrị - nkwụghachi ụgwọ.
UST dara na $0,95 n'etiti mgbanwe
Protocol DeFi izizi nke S&P debere ya